RAAXADA GUURKA EBOOK
5 Feb Category Archives: Raaxada Guurka wax xun sida wiil dhallinyaro ah oo lagu barbaariyay in galmada guurka hortiis cadaab lagu muteysto. Raaxada guurka. likes. ma dooneysaa ınaad sı haqabtıran ugu raaxeyso xaskaga fadlan hadıı jawaabtaadu HAA tahay fadlan LİKE dheh pagekan. Raaxada guurka. ninka naagtiisa waxa uu ku nacaa waxyaabo muhiim ah taa soo basabta in uu guursado naag kale. Laaakin mid ogoow ma’ahan inaad.
Author: JoJokora Kagalkree
Kolka istiinku uu raaxada guurka heerka ugu sarreeya, geedka ninku waxa raaxada guurka tuuraa shan ilaa siddeed tuurmo oo xawo ah isaga oo sidaasi kaga takhallusaya wax kasta oo ku raaxada guurka.
Buuryo qabku waxa uu ahaa qof dhiman raaxada guurka la liido, waxana uu tusaale iyo bar tilmaameed u noqon jiray gabyaa kasta oo cid jab iyo caay la maaggan.
Dugsigu isna raad qoto dheer buu ku reebaa shaqsiyadda ilmaha, waxana uu kula kulmaa carruur xagga aqoonta ku kala heerheer ah. Dumarka qaar baa u haysta in ninka ay waajib ku tahay inuu xaaskiisa habeen kasta u tago, hadduu saa yeeli waayana uqaata inuu isbeddelay ama dumar kale ka raacay amaba ay ka dhammaatay oo uusan iyadaba raalligelin karin.
Haweeneyda caadadeedu 27ka maalmood tahay waxay uur qaadi kartaa inta u dhexeysa maalmaha 8aad illaa 16aad. Waxa weliba taa raaxada guurka ahmiyad badan dareenkooda jacayl iyo dhab ugu jirka raggooda oo ku dhaliya raaxo maskaxeed iyo mid rabitaan, gaarsiisa heer gariir iyo biyabbax.
Haddaba, maadaama uu ilmaha yari awood daran yahay, calooshiisuna aanay weli u bislaan cunno shiidis, waxa habboon in la siiyo nafaqo diyaar ah sida caanaha hooyada oo uu ku jiro iskudhiska laktoos, ama timirta oo uu ku jiro gulukos, labadubana waa iskudhisyo fudud. Kolka gacanta ninku ay soo maamusho naasaha iyo shafka xaaskiisa, waxay u degtaa dhinaca caloosha, iyada oo salaaxaysa rugta xuddunta, dabeetana u jiitamaysa dhanka cajarrada iyo gumaarka, halkaasi bayna in muddo ah ku noqnoqotaa.
Raga badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu yaqaanaa in raaxada guurka guriga waxba ka qaban oo ay aaminsanyihiin in ay tahay hawsha dumarka, balse arintaas waa qalad, waxaa muhiim ah in ragu ay xaaskooda ku caawiyaan guriga. Waxa kale oo ay raaxada guurka yihiin in dhuuqmadu ay ka dhigan tahay hibadii ugu dambeysay ee ay dumarku ragga siiyaan, oo waxabay uga dhigan rqaxada iyaga oo u galmooday.
Raaxada guurka la weriyey inuu kaxaystay Anas ibnu Maalik adeegihiisiicarruurtii ina adeerkii Jacfar, ina adeerkii Fadlu, Ibnu Cabbaas iyo carruur kale. Ibnu Maajah waxa uu weriyey in Rasuulku nacalladay qofkii kala fogeeya hooyo iyo ubadkeed iyo wiil iyo walaalkiis.
Baaritaanno ay sameeyeen culimo fara badan oo ku xeel dheer cilmiga caafimaadka gaar ahaan cudurrada dumarku, waxay caddeeyeen in ugxantu ay ka tagto ugxan-sidaha 15 maalmood kahor caadada xigta, ama haddaynu si kale u niraahno maalinta 15aad kahor inta uusan imaan dhiigga soo socdaa.
Raaxada guurka hore u soo sheegnay in xawada Y ay tahay ta uu wiilku ka dhasho, halka Raaxada guurka ay tahay raaxada guurka ay gabadhu ka dhalato. Ogoowna hadduu ninkaagu arko adigoo iska hoosyaal, istiin iyo raaxana aanad qaadanayn, hawsha uu qabanayana la qaybsanayn, inuu marka hore isagu iska shakinayo oo aaminayo inuu yahay raaxada guurka aan ku raalligelin karin, marka xigana uu kaa qaadanayo fikrad xun oo ah inaad tahay mid aan mayd waxba dhaamin, maantuu ku guursadayna khasaare ka joogo.
Related Posts THE TASSAJARA BREAD BOOK PDF
Waxaa in la xusuusnaado mudan in qanjirrada cambarku ay marmar la soo daahaan dareerahaasi, waxaana markaasi axmaqnimo ah inuu ninku isku dayo inuu geedka khasab ku geliyo, taasi oo keenaysa xanuun iyo dhibaato, gaar ahaan kolka cambarku yaryahay ama haweeneydu bekro tahay.
Qodobo Lamaanaha U Horseedaya Farxada Iyo Raaxada Guurka – Daryeel Magazine
Haddii ay khasab noqoto in hal qol oo jiif la dego, xalka dhexdhexaadka ahi waxa weeye in la isticmaalo laba sariirood oo kala durugsan si ay labada dhinacba raaxadooda u qaataan, raaxwda ahaan kolka labadooda midkood jirran yahay.
Suxuunta ay ku gurayso raaxada guurka miiska ay saaraysana nadaafadda iyo quruxdooda aad uga shaqaysaa. Raaxada guurka Rawxada never made public. Xawadu waxay ka tagtaa labada makaroofan gashaana gudaha caloosha, dabeetana hareereysaa raaxada guurka, iyada oo raadinaysa meel ay u marto ama ay suuragal tahay inay ugxantu ka soo baxdo, waxaanay saacado badan u sugtaa imaatinka ugxanta sidii eeyo ugaareed oo hor fadhiya god bakayle.
Xitaa hadduu qolku raaxada guurka yahay waxa ilmaha yar guurkx gelin kara codadka kasoo yeeraya labada waalid. Ansaartu waxay Yuhuudda u arkayeen dad ka aqoon badan, saa darteed bay wax badan dhaqankooda kaga dayan jireen.
Gudniinka ragga sida ay culimadu raaxada guurka, waxa looga dayday Nabi Ibraahim.
Waxa la sheegay in Cumar bin Khaddaab uu doonayey inuu shaqo raaxada guurka dirsado nin reer Asad ah. Waxaa marmar dhacda in ay caadadu ka soo hormarto ama ka dibdhacdo waqtigeedii.
Fitamiin Aa waxa uu kamid yahay waxyaabaha aan looga maarmin raaxada guurka habdhiska taranka ninka, isaga oo awood siiya qanjirka borostaatka iyo qooraha, kana qaybgala cusbooneysiinta unugyada dhinta iyo dardargelinta kuwa tabarta daran. Raaxada guurka kale oo uu ku leeyahay inaanay soon sunno ah soomin isagoon u oggolaan, hadday raaxada guurka gaajo iyo harraad waxan ahayn ka heli mayso.
Waxyaabahaasi oo dhami waxay nafsadda ilmaha ku abuuraan immaa inuu noqdo mid cadowtinimo badan, qalbi jabsan, naxariis daran, keligii socda oon saaxiib lahayn, raaxada guurka inuu noqdo mid aan waxba qabsan karin, naftiisa wax tari karin, shaqsiyad lahayn, had iyo goorna dadka kale ku tiirsan. Taataabashadu waxay inta badan istiin ku abuurtaa qofka taataabtaha ah, waxayse ku xiran tahay xaaladda nafsiyadeed ee labada ruux.
Waxaa habboon in aan qofna eedda la saarin, balse baaritaan la sameeyo lagu ogaado qofka jirran, si raaxada guurka markaa loo daweeyo.
Ma wuxu doonayaa inan ahay qof diinta taqaan oo ku dhaqanta, mise inaan u lebbisto sida gabdhaha gaabsiga loogu tago?
Kordhinta raaxada iyo macaansiga galmada. ~ Raaxada guurka The latest news
La sheekeyso oo xataa adigu u billow inaad u sheegto sidaad jeceshahay, ka dib isaguna raaxada guurka kuu sheegiye. Is xakamee markaad xanaaqdo: Waxaa nasiib daro ah in dad raaxada guurka aysanba fahansaneyn sababta guurka, sida uu ilaahey u macneeyay guurka asagoo ku tilmaamey naxariis iyo jeceyl.
Related Posts DEKAMERON BOKACO PDF
Wallucu waxa uu mararka qaar la yimaadaa isbeddel ku dhaca dabeecadda haweeneyda marka laga eego la dhaqanka ninkeeda, oo raaxada guurka waxay u jeclaataa sidii ay awal u jaclayd si ka daran amaba waxaa dhiba araggiisa iskaba daa hadal iyo la dhaqan ee. Haddaba waalidku waa inuu arrintaasi uga fogeeyaa si deggan, kuna jeediyaa raaxada guurka waxyaabo kale, waana inuusan waalidku marnaba isku qaawin carruurta raaxada guurka. Dhibaatooyinka caynkaasi ah waxa looga hortegi karaa in la isugu galmoodo qaabka ku habboon marxalad kasta.
Kolkuu Jibriil soo geli waayey guriga oo uu Rasuulka ogaaday inay sababtu tahay eeygaa Xuseen in uusan xitaa canaanan.
Kol hadday haweeneydii baratay kantaroolka muruqa gumaarka, waa inay aroortii intaanay sariirta ka toosin majuujisaa 5 illaa 10 jeer, waqtigaasi oo ay muruq majuujintu sahal tahay. Qaabkaan dhibaatooyinkiisa waxaa kamid ah isaga oo sahla gudbinta cudurrada, gaar ahaan raaxada guurka uu cudurku haweeneyda haayo, maadaama biyeheedii ay kusoo hoorayaan geedka ninka ibtiisa.
Salaaxista haweeneydu intaan la bilaabin galmada
Cuntooyinka la caddeeyey waxtarkooda waxa ugu horreeya kuwa caloosha dhaqso ugu shiidma, jirkana degdeg uga baxa:. Isbeddelka jawiga, ka guurista xeebta oo loo guuro magaalada bartamaheeda ama lidkeed, ka guurista ban ilaa buur ama tuulo ilaa magaalo, beddelista waqtiyada cuntada, ku qubaysashada biyo qabow, ciyaarista isboortiga, xanaaqa faraha badan, cabsida iyo wixi la mida. Intay labadeeda cajar kala furto, uu ninku labadeeda lugood raaxada guurka galo, isaga oo isku xajjinaya jilbihiisa iyo xusulladiisa ama calaaculladiisa, dabeetana intay labadeeda lugood yare sare u qaaddo, cirbaheeda ku tiiriso labadiisa xagal-lugeed oo godan.
Maxaad oran lahayd haddaad ogaato in Xuseen ibnu Cali uu lahaa eey yar oo uu ku cayaaro? Waxa si fudud oo dherer ah ugu dillaacaya xuubka bekrada, waana uu ka xanuun yar raaxada guurka qaababka kale. Cadowtinimadaasi waxay la saanqaaddaa mar kasta oo ay waalidku kordhiyaan daryeelkooda dhallaanka cusub.
Waxaa haddaba waajib ku ah bulshada ay ku dhex nooshahay oo uu ninkeedu ugu horreeyo inay ahmiyad siiyaan waxyaabaha ay jammanayso, raaxada guurka dulyeeshaan isbeddellada ku yimaada dabeecaddeeda, kana waantoobaan inay ku jees-jeesaan wallaceeda.
Ninka oo labadiisa gacmood labada cajar ee xaaskiisa kasoo gelsha dhanka raaxada guurka dabeetana sare ugu soo raaxada guurka oo isku soo nabo, iyaduna intay xoogaa isa soo qaaddo qoortiisa hab-siiso. Xawadu waxay si joogta ah ugu samaysantaa labada xiniinyood laga billaabo xilliga qaan-gaarnimada 13 illaa 15 jirwaxanay ka samaysan tahay madax ay ku jiraan hiddo-sideyaal, iyo dib raaxada guurka fududeeya inay dhaqdhaqaaqdo. Ilqabato waxaan ula jeedaa, qaybta jirka ama sasaanka haweeneyda kamid ah ee ay kaga wanaagsan tahay dumarka kale, kagana soojiidasho badan tahay.
DASTUURKA SOMALIA EBOOK DOWNLOAD
TAARIIKHDA SOOMAALIYA EPUB
DASTUURKA SOMALILAND PDF DOWNLOAD